अरुण बराल | Ratopati
हे भगवान् ! प्रचण्डलाई ‘आइडिया’ देऊ ! access_timeपुस १६, २०७८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौँ महाधिवेशन चलिरहेकै बेला एकजना केन्द्रीय नेताले टेलिफोन गरेर यस पङ्क्तिकारलाई सोधे– प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि तपाईंले टिप्पणी नलेख्ने ? अध्यक्षको प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म तपाईंको विश्लेषण पढ्न पाइएन नि ? पत्रक...
प्रचण्डलाई हेप्ने ? डिस हान्ने ? access_timeकात्तिक ८, २०७८
‘हेप्ने ? डिस हान्ने ?’ भन्ने यो शब्दावली सामाजिक सञ्जाल, खास गरी टिकटकमा ट्रोल बनेको धेरै भइसक्यो । नेकपा एमालेका पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको शब्द र स्वरमा भाइरल बनेको शब्दावली हो – हेप्नी ? डिस हान्ने ? म कोल्याप्स गर्दिन्छु नि फेरि ! अघिल्लो सात...
खबरदार ! चुनाव सारेर संविधान नमिचियोस् access_timeकात्तिक ३, २०७८
दसैँ सकिन नपाउँदै राजनीतिक बजारमा निर्वाचनसम्बन्धी केही समाचारहरू आए : एक– प्रतिनिधिसभाको अर्ली इलेक्सन गर्ने । दुई– संघीय निर्वाचन सकेपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने । र, तीन– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैसाथ गर्ने । स...
सत्ता गठबन्धन : एमालेको वियोगान्त ! access_timeभदौ ३०, २०७८
‘अबको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेकै यो सत्तारुढ गठबन्धन कसरी फुटाउने भन्ने हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य जोड पनि यसैमा केन्द्रित छ । यो गठबन्धन या त आन्तरिक किचलोबाटै भत्कन्छ, नभए बाहिरी दबाबबाट तोड्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल ...
केपी vs माधव : को बलियो, को दुब्लो ? access_timeभदौ ११, २०७८
कुनै पनि विषयको विश्लेषण गर्दा SWOT एनालाइसिस सम्बन्धी एउटा मान्य सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तअनुसार विश्लेषण गर्दा सबलता (Strength), कमजोरी (Weakness), अवसर (Opportunity) र चुनौती (Threat Analysis) समेत चारवटा पक्षलाई हेर्ने गरिन्छ । विश्लेषणको यो सिद्धान्तले ...
संकटमा १० राजनीतिक शक्ति access_timeसाउन २४, २०७८
भनिन्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहम हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन दलहरु बलियो हुनुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । र, दलहरुमा राजनीतिक संस्कार एवं नैतिकता पनि हुनुपर्छ । जब राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक स...
एमालेको अन्तरकथा : ओली र माधव स्पष्ट, अरु अस्पष्ट ! access_timeअसार २०, २०७८
सत्तारुढ नेकपा एमालेको अन्तरविरोध वार कि पार हुने निर्णायक चरणमा आइपुगेको छ । अन्तरविरोधलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नो लाइनमा स्पष्ट देखिएका छन् । दुबै समूहका अरु नेताचाहिँ अहिलेसम्म अलमलमा देखिन्छन् । का...
राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी access_timeअसार १२, २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते व्यवस्थापिका संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन शुरु गरे । फागुन ११ मा न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापनामार्फत् आधा ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्यो र संविधानलाई ‘लिक’ मा फर्कायो । तथापि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोग...
केपी भर्सेस माधव : संकटको डिलमा को छ ? access_timeबैशाख १५, २०७८
सत्तारुढ एमालेको अन्तरविरोधका दुईवटा लक्षण छन् : एउटा देखिने, अर्को नदेखिने । देखिने लक्षण– अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालका फरक–फरक अडान हुन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको अडान छ– नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि छ...